Hay'adaha ka shaqeeya Soomaaliya oo dalbadey 1.5 billion | KEYDMEDIA ONLINE
Hay’adaha ka shaqeeya Soomaaliya oo dalbadey 1.5 billion
Soomaaliya waxaa ka jirta abaar saameysay dad kumanaan gaaraya, oo intooda badan ah Xoolo-dhaqato iyo Beeralay ku nool Koonfurta iyo Bartamaha dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qaramada Midoobey iyo Hay'adaha kala ee Samafalka ayaa dalbadey ku dhawaad 1.5 billion dollar, oo lagu caawinayo 5.5 milyan qof oo saameysay abaarta.
Waxay sheegeen hay'adaha in hadii aan hadda laga hortagin ay Soomaaliya ku dhufan doonto 2022 macluum lamid ah midii 2011, oo 260,000 oo qof ay ku dhimatay, sida QM sheegtay.
Xafiiska isku duwida gargaarka bini'aadanimo ee QM, OCHA ayaa sheegay shalay inay soo fasaxeen lacag gaareysa 17 milyan oo dollar, si loogu daboolo baahiyaha degdega ah ee dadka Gaajada iyo Haraadka/oonka u dhimanaya..
"Si loo badbaadiyo nolosha shacabka Soomaaliyeed, loogana hortago musiibo bini'aadanimo, waa inaan hadda helnaa lacagta gargaarka lagu gaarsiinayo kuwa u baahan," ayuu yiri madaxa UN OCHA Chief Martin Griffiths oo shalay qoraal soo saarey.
Soomaaliya ayaa wajahaysa saddex sano oo roob la'aan ah, taasoo ka dhalatay abaar daran inay dalka ka dilaacdo, taasoo lagu tilmaamay midii ugu xumayd oo la arko mudo 30 sano ah
Dadka Soomaaliya ku nool waxay 31 sano kusoo jireen dagaal sokeeye, amni la'aan, barakac iyo dhibaatooyin kale, oo qaarkood wali taagan, sida Covid-19 iyo khilaafka doorashadda.
QM ayaa ku qiyaasaysa 7.7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ay u baahnaan doonaan gargaar bini'aadanimo sanadkan cusub ee 2022. Hal milyan oo Carruur ah, oo da'doodu ka yartahay 5 sano ayaa wajahaya macluul daran iyo nafo-darro.
Khadiija Maxamed Diiriye, oo ah Wasiirka Gargaarka Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladda abaarta dalka ka jirta hadda ay baabi'isay xoolihii dadka dhaqan jireen, iyadoo ay qalaleen Ceelashii biyaha laga cabi jiray.